PRINCE2 Certification: A Complete Guide - ITS Tech School
PRINCE2 is an acronym for Projects In Controlled Environments. Iyo nzira yakarongeka yekugadzirisa basa inokuita kuti uwane zvose zvinokosha zvekutarisira basa kubudirira. Pakutanga kwaiitirwa nzvimbo dzeI IT chete, asi inosanganisira marudzi ose emapurogiramu uye mamwe ose masangano emabhizimisi akawanda kwazvo. Pakutanga, apo yakasunungurwa muC1996, yakanga iri nzira yekugadzira mishonga yemagetsi asi ikozvino iyo inofanirwa nehuwandu hwehutungamiri hweprojekti mumatare akawanda ehurumende yeUnited States nemabhizimisi emabhizimisi ega. PRINCE2 inonyanya kusimbisa pakuparadzanisa mapurojekiti mune zvikamu zvinotarisirwa uye zvinogona kudzora nyore nyore. PRINCE2 certification inogona kukubatsira nekukura kwemabasa
Muna 2013, kodzero yehuyo ye PRINCE2 yakatamiswa kubva kuHM Cabinet Office kuenda AXELOS Ltd (ivo vane huwandu hwavo hunogoverwa pakati peKomiti yeKhabhinethi naCapita plc.).
CHIKAMU I - PRINCE2 Foundation Training
CHITSAUKO II - PRINCE2 Kudzidzisa Vanodzidzisa
Kana iwe uri munhu anofarira mabasa ekuchengetedza basa, ipapo PRINCE2 certification inogona kukubatsira iwe nekukura kwebasa. Izvi zvinosanganisira matanho maviri: PRINCE2 Foundation uye PRINCE2 Practitioner. PRINCE2 kudzidziswa chikwata chekugadzirira kunogona kukugadzirirai zvose uye kukuzivawo ne-de-facto standard iyo zvino inoteverwa pasi rose. Munguva yekudzidzira, mumwe anowana unyanzvi mune mirayiridzo yekugadzira purojekiti uye maitiro akanaka kupfuura PRINCE2.
Nhoroondo ye PRINCE2
PRINCE2 iyo inotungamirirwa nehutungamiri-hutungamiri hutsika. Inoumbwa nemitemo minomwe, zvinyorwa zvinomwe uye zvinomwe zvinomwe.
MASHOKO: Mhemberero chinhu chinokosha cheimwe hurongwa, iyo inofanirwa kuendeswa mberi uye yakabatanidzwa kana kuitwa kweprojekti kunofanira kubudirira. Misoro minomwe ndeye:
MAZANO: Basa rekushandisa rinosanganisira zvinomwe zvinoshandiswa zvinowanikwa pasi rose zvezviito zvakanaka zvinogona kushandiswa pane chero basa. Aya mazano manomwe ndeaya:
Kupfuurira Bhizimisi Kururamiswa
Kudzidza kubva pane zvakaitika
Kunotsanangurwa Mabasa uye Mabasa
Kuenzanisa Nekudaro Project Environment
MITAMBO: Aya maitiro manomwe ndiwo matanho anokosha anodiwa ekutarisa, kutungamirira uye kugovera purogiramu kubudirira. Izvo zvinomwe zvinowanikwa ne:
Kugadzirisa Kutengeswa Kwekugadzirwa
Kutarisa Nhanho Yechikamu
Izvo zvinotaurwa pamusoro apa nemitemo inoshandiswa mune izvi zvinomwe zvinopera.
Pamusoro pezvikonzero nei uchifanira kuwana PRINCE2 Certification?
Kuti uwane makwikwi ekukwikwidzana pakati pezera rako- Kuwana PRINCE2 chiyeuchidzo kuvimbiswa kweunyanzvi hwako semushandi wepurojekiti uye kukwanisa kwako kushandisa PRINCE2 nzira dzekushandisa.
Kuzivikanwa kweruzivo rwako, unyanzvi uye unyanzvi-Ikusavhiringidza kusingabatsiri kweunyanzvi hwekugadzirisa huwandu pane huwandu hwepasi rose.
Kubudirira- PRINCE2 certification inoratidza unhu hwemunhu semukuru wehutungamiri wepasi rose.
Mikana yepamusoro yebasa uye mari yakawanda-Nechirongwa ichi, uchakwanisa kuongorora mikana yepamabasa. Vashandi vechiratidzo vanogonawo kutarisira kuwedzera kwemari yekuwedzera.
Kufambira mberi mubasa- Kuwana PRINCE2 chiyeuchidzo kunoratidza kuti iwe unofarira kutora mabasa akawanda.
Kuvandudza ruzivo uye unyanzvi-Kugadzirira kwe PRINCE2certification inoda kuti iwe udzidze uye uongorore maitiro ehutungamiri huno uye unyanzvi hunoshandiswa. Izvi zvakasimbiswa nechikwereti chaunowana.
Kuwedzerwa kuvimba- Ne ruzivo, ruzivo, unyanzvi uye huwandu hwehuwandu hwemashizha, iwe pachako unovaka pfungwa yekuzvivimba uye unova wakagadzirira kuzvitsanangurira kunze kwezita remutambo webasa.
Onawo: PMP Certification Career Opportunities
STEPI I - PRINCE2 Foundation Training
Chikoro che PRINCE2 Foundation chinonyanya kusimbisa pfungwa. Kuziva nemanzwiro inoita kuti munhu anenge aine chivimbo aine shungu paanoita zvidzidzo zvinobatsira zvePRINCE2 kudzidzira mune unyanzvi hwepamusoro. Idzi nheyo, zvinyorwa uye nheyo dzinofanira kunzwisiswa zvakadzama.
Nheyo Yokuongorora inotsvaga mubatidzi pane zvaanogona kuita senhengo inonyatsozivikanwa yeboka rinotungamirira basa vachishandisa PRINCE2. Kuchenesa kuongorora kunosimbisa kunzwisiswa kwemubatsiri wePRINCE2 terminology, mazano, zvinyorwa uye nzira.
Pakupera kwekudzidziswa kweChechi, nyanzvi inogona kubudirira kuita zvinotevera:
Zvichienderana nechinangwa uye zvinyorwa zvebasa rose mune imwe neimwe yezvidzidzo zvinomwe, mazano nemitemo.
Kusarudza kuti ndeipi yemapurogiramu ekufambisa inopindira uye / kana kuti inobva pane zvinomwe zvinopera.
Kugadzirisa chinhu chinokosha uye zvinangwa zvepamberi dzemakambani ekutungamirira.
Kugadzira ukama huri pakati pemaitiro, maitiro, maitiro ekutarisira & zvigadzirwa zveprojekti.
Zvinotarisirwa - hapana
Zvose kwete. yemibvunzo - 75
Mibvunzo yekuongorora - 5
Passing marks - 35 (kana 50%)
Nguva yekuongorora: 1 awa
Type of Exam - Yakabviswa bhuku
STEPI II - PRINCE2 Practice Training
Mushure meSvondo Training, PRINCE2 Practitioner training certification inosimbisa kuti mubatidzi akawana kunzwisisa kwekushandiswa kwe PRINCE2 mumapurojekiti chaiwo. Nehutungamiri hwakakodzera, mukana wacho achakwanisa kushandisa nzira dzakadzidza kune imwe purojekiti yekugadzirwa kwayo kubudirira.
Zvimwe zvinangwa zvePRINCE2 zvinotarisirwa chete kumunhu wePrectitioner. Apo Sangano reSvondo rinotsvaga ruzivo rwomubatsiri rwemashoko ePRINCE2, mazano, maitiro uye mabasa, Muongorori wevarume anoongorora kukosha kwavo kushandisa PRINCE2 nzira mune chimwe chiitiko.
Mushure mokubvisa PRINCE Practitioner kudzidziswa uye kuongorora, iwe uchava nekwanisi yeku:
Kubudisa tsanangudzo yakakwana yezvose zvinyorwa, mazano nemitemo uye mienzaniso yakavonekwa yezvose PRINCE2 michero yekushanda kugadzirisa imwe nyaya yemamiriro ezvinhu.
Kuratidzira kunzwisisa kwehukama pakati pemitemo, zvinyorwa uye nzira uye PRINCE2 michina pamwe nekwanisi yekushandisa izvi kunzwisisa.
Kunzwisisa chinangwa chemashoko, zvinyorwa uye nzira uye nekuziva mazano ari shure kwezvinhu izvi.
Zvinotarisirwa - PRINCE2 Foundation, PMP®, CAPM®, IPMA-D, IPMA-C, IPMA-B, kana IPMA-A
Format - Chinangwa chinangwa, 8 mibvunzo X 10 zvinhu
Nhungamiro dzinokosha dzekudzidza:
Unganidza zvakakodzera zvidzidzo zvekudzidza. Nzvimbo yepamutemo yewebhu yeAXELOS inogona kubatsira.
Edza kugadzirisa shanduro peji kana maviri kuti uongorore uwandu hwako uye pini inoratidza nzvimbo dzako dzisina simba. Ichakubatsirawo kuti uenzaniswe nemhando yekuongorora. Semupepa mapepa inogona kubudiswa kubva pawebsite yepamutemo yeAXELOS.
Nzira kana maitiro anotevera musangano rako razvino harifaniri kubatsira. Saka zviri nani kubatisisa maitiro ePRINCE2 paanopindura.
Ichakubatsira iwe kugona unyanzvi hwako.
ITIL nheyo dzekudzidzira paakachiona, Florida kubva ku7 kusvika ku 9 th August
Yakanunurwa ITIL Foundation Training 16th Sept. - 17th Sept.